Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Luulyo, 2014, 18:47 GMT 21:47 SGA
Dalalka deeqda bixiya ayaa ku shiraya Addis Ababa, oo ay ka balanqaadeen lacag ka badan 450 milyan oo doolar oo la siinayo hawlgalka militeri ee caalamiga ah ee dalka Mali ee lagula dagaallamayo kooxaha Islaamiyiinta.
29 Janaayo 2013
Qarax ayaa dhacay Madaxtooyada Masuuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen markii qof bam isku soo xiray uu isku qarxiyay meel u dhaw xafiiska Raiisul Wasaaraha ee magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab oo laga xiray bogga twitter-kaMaqal02:29
Kooxda al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa boggii ay ku lahaayeen twitter-ka maanta la xiray. Xarakada Al-Shabaab oo sameysay boggaas sanadkii 2011 ayaa waxaa ku xirnaa tobanaan kun oo qof oo la socon jiray wararka ay soo geliyaan.
25 Janaayo 2013
Shabaab oo laga xiray booga twitter-kaMaqal02:07
Kooxda al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa boggii ay ku lahaayeen twitter-ka maanta la xiray. Xarakada Al-Shabaab oo sameeysay boggaas sanadkii 2011 ayaa waxaa ku xirnaa tobanaan kun oo qof oo la socon jiray wararka ay soo geliyaan.
Kooxda al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa boggii ay ku lahaayeen twitter-ka maanta la xiray. Al-Shabaab oo sameeyay boggaasi oo la oran jiray HSMPress sanadkii 2011, ayaa waxa ay inta badan u istcimaali jireen inay soo geliyaan sheegashada weerarrada.
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in weerar diyaaradaha Maraykanka ee aan qofna wadin ay ku qaadeen Yemen inay ay dileen siddeed qof.
20 Janaayo 2013
Shir looga hadlayo Mali
Hogaamiyayaasha Galbeedka Afrika ayaa imanaya magaalada Abidjan ee Ivory Coast si ay uga hadlaan ciidamada loo dirayo Mali.
19 Janaayo 2013
Aljeriya: Ilaa soddon qof oo maqan
Maraykanka iyo Japan ayaa ka mid ah dowladaha ka codsaday Aljeriya inay muhiimada ugu horaysa ka dhigto ammaanka dadka la haysto.
Kooxda Shabaab ee xiriirka la leh al-Qaacida ayaa sheegtay inay dileen nin Faransiis ah oo ay haysteen muddo afar sano ah. War ay ku qoreen boggooda twitter-ka ayaa Shabaab waxa ay ku sheegeen inay dileen Arbacadii Denis Allex.
17 Janaayo 2013
Askari Faransiis oo la sheegay inuu dhintay
al-Shabaab ayaa soo daabacday sawirka nin caddaaan ah meydkiisa oo ay ku sheegtay inuu yahay taliye Faransiis ah oo qeyb ka ahaa hawlgalkii fashilmay ee Buulo Mareer. Dowladda Faransiiska ayaa cambaareysay daabacaadda sawirka askariga.
14 Janaayo 2013
Kooxaha CAR oo xabbad joojin iska raacay